I-eCourse yamahhala ne-eBook - uCarl Henry ONLINE! SUCCESS
Ukungena lokhu nalokho kufomu lokusesha lizobuyisela imiphumela equkethe kokubili "lokhu"Futhi"ukuthi".
Ukungena lokhu akusikho lokho kufomu lokusesha lizobuyisela imiphumela equkethe "lokhu"hhayi"ukuthi".
Ukungena lokhu noma lokho kufomu lokusesha lizobuyisela imiphumela equkethe noma "lokhu"noma"ukuthi".
Ukungena "lokhu nalokho" (ngezingcaphuno) efomini lokusesha izobuyisela imiphumela equkethe inkulumo ethi "lokhu nalokho".
Imiphumela yosesho ingabuye ihlungiwe ngokusebenzisa izindlela ezihlukahlukene. Khetha eyodwa noma ngaphezulu yezihlungi ezikhona ukuze uqalise.
Usuku okuqalwa ngalo
Uqinisile Ngaphambi Ngemva
I-ONLINE SUCCESS - 60 yesibili CHECKLIST - 9 Izinyathelo Action! ukusetha noma iyiphi ibhizinisi le-intanethi
Phumelela ku-Intanethi nganoma yimuphi umkhiqizo, isevisi, ukuzilibazisa, ibhizinisi, inhlangano noma ngisho nokuphakamisa imali ngenxa yomusa wakho noma umphakathi!
Nazi izinyathelo ze-9 ozibonayo kuvidiyo, nazo zihlanganiswe kwi-Course yamahhala kodwa ngokuningiliziwe okuningi, iziqondiso ezigcwele ngezinyathelo, amathuluzi akhethekile nezinsiza ozidingayo ukuze uphumelele!
I-1) Khetha isihloko se-Niche
Qinisekisa ukuthi kufanelana namakhono akho, amandla, izintshisekelo, izithakazelo, futhi uyithokozisa!
I-2) Yenza i-Traffic Targeted
I-traffic yakho ekahle kuyoba ngabantu; unesithakazelo esihlokweni osibekela wona futhi sinesidingo esingagcwaliseki oyosihlinzeka ngesisombululo noma impendulo.
3) Yakha uhlu lwe-imeyili
Udinga indlela yokubamba igama nekheli le-imeyili labantu abajoyina uhlu lwakho lwe-imeyili ngokugcwalisa ifomu elifushane.
I-4) Nikeza isipho
Nikeza izivakashi zakho zewebhusayithi isipho semininingwane ephezulu yamahhala ngokubuyisela ikheli le-imeyili.
I-5) Hlela ama-imeyili
Ngemuva kokuthi abantu bakunike ikheli le-imeyili kudingeka ube nesistimu yokuthumela ama-imeyili akha ukwakha, abakhumbuze ukuthatha isinyathelo nemikhiqizo eyengeziwe.
I-6) Khetha Imikhiqizo Yokuthengisa
Ungathengisa imikhiqizo yakho noma abanye abantu, vele uqinisekise ukuthi bafanisa isihloko sakho se-niche futhi akusizi kakhulu ukuqala ngawo.
I-7) Qoqa imali online
Qala ngokuvula futhi usebenzisa i-akhawunti ye-PayPal ukuthenga izinto nokuqoqa imali & sebenzisa amapulatifomu womkhiqizo oqoqa imali kwakho.
I-8) Imakethe yamahhala nokukhokha
Ukwenza ithrafikhi yamahhala kuthatha isikhathi esiningi ukuxuba eminye imithombo ekhokhelwe yezivakashi zewebhu ukusheshisa imiphumela yakho.
I-9) Ukusetha Domain, ukusingatha & iwebhusayithi
Amawebhusayithi wamahhala kungenzeka kepha ibhizinisi eliku-intanethi likhona ngegama lakhe lesizinda futhi linamawebhusayithi adidiyelwe afakwe ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
Thatha isinyathelo manje ngokubhalisa ngezansi!
Asikwazi! Yabelana noma uthengise Ulwazi Lwakho - I-GDPR, Amakhukhi & Ubumfihlo - Imigomo Nemibandela
9 Izinyathelo ku-ONLINE! SUCCESS ku-60 Seconds - buke manje !!
Thola ukuqeqeshwa kwamahhala manje!
Bhalisa amahora angu-24 / izinsuku ezingu-7 ngesonto futhi uzothola ngokushesha;
Imiyalelo yamahhala yokusetha kwakho ku-intanethi
I-eBook yamahhala (Okuqukethwe okwengeziwe)
Ukufinyelela amathuluzi ami akhethekile kanye neziNsiza
Asikwazi! Yabelana noma Thengisa Ulwazi Lwakho
I-GDPR, Amakhukhi & Ubumfihlo - Imigomo Nemibandela
I-CHG - I-Social Media
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-GDPR nokusetshenziswa kwe-Cookie
Singabantu Iwebhusayithi Evikelekile - Chofoza ukuze ubone iSitifiketi sethu se-SSL
Copyright © 2017 UCarl Henry Global - Izindleko ze-Inthanethi | Izakhiwo zangempela | Internet | Izinkampani | Indlela yokuphila. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Iwebhusayithi: www.carlhenryglobal.com Contact: info@carlhenryglobal.com
Ukuzuza Okungenzeka Ukuziphendulela (Amathuba Ebhizinisi)
Yonke imizamo yenziwe nguCarl Henry Global sa. ukumelela ngokunembile imikhiqizo yethu nemikhiqizo esiyiphakamayo kanye namandla abo. Ngisho noma imboni yokuthengisa inthanethi ingomunye wabambalwa lapho umuntu angaba nempumelelo enkulu yezezimali ngokutshalwa kwezimali okuncane kakhulu, akukho siqinisekiso sokuthi uzothola noma yimaphi imali usebenzisa amasu nemibono kule website nakumaphepha atholakalayo. Izibonelo kulezi zinto azifanele zihunyushwe njengezithembiso noma isiqiniseko semali engenayo. Ukuthola okungenzeka kuncike ngokugcwele kumuntu osebenzisa umkhiqizo wethu, imibono namasu. Asikhuthazi amathuba njengalokhu "ukuthola uhlelo olucebile".
Izinto ezibonakalayo emikhiqizweni yethu kanye namawebhusayithi ethu angase aqukethe ulwazi olufaka noma olusekelwe ezitatimendeni ezibheke phambili ngaphakathi kwencazelo yesitatimende sokubambisana nokugcinwa kwezimpahla ze-1995. Izitatimende ezibheke phambili zihlinzeka ngezifiso zethu noma izibikezelo zezehlakalo ezizayo. Ungazibona lezi zitatimende ngokuthi azihambisani ngokuqinile namaqiniso omlando noma amanje. Basebenzisa amagama njengokuthi "balindele," "balinganise," "balindele," "iphrojekthi," "bahlose," "bahlele," "kholwani," kanye namanye amagama kanye nemigomo efana nencazelo efanayo phakathi kwencazelo yemali engenayo noma ukusebenza kwezezimali .
Isitatimende esibheke phambili lapha noma kunoma yikuphi okuqukethwe kwethu okuthengiswayo kuhloswe ukuveza umbono wethu wemali engenayo. Izici eziningi zizobaluleka ekunqumeni imiphumela yakho yangempela futhi akukho okuqinisekisiwe okwenziwe ukuthi uzofeza imiphumela njengezibonelo ezicashunwe, empeleni akukho ziqinisekiso ezenziwa ukuthi uzofeza noma yimiphi imiphumela emibonweni kanye namasu ethu kokuqukethwe kwethu.
Noma yiziphi izimangalo ezenziwe ngemali engenayo yangempela noma izibonelo zemiphumela yangempela zingagcinwa uma kuceliwe. Izinga lakho lokuphumelela ekufinyeleleni imiphumela lifunwa ezintweni zethu zixhomeke esikhathini ozinikela kulo, izifundo nemasu ekhonjiwe, izimali zakho, ulwazi namakhono ahlukahlukene. Njengoba lezi zinto zihluke ngabanye, asikwazi ukuqinisekisa ukuthi impumelelo yakho noma izinga lakho lokuthola imali. Futhi asikho obhekene nanoma yiziphi izenzo zakho. Zonke izikrini, ubufakazi nezithombe zenzelwe umdwebo kuphela.
Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa iwebhusayithi yethu kanye nolwazi lwakho uma ulisebenzisa. Amakhukhi asetshenziselwa ukusebenza okubalulekile kwalesi sayithi asevele asethiwe. Ukuthola kabanzi mayelana namakhukhi esiwasebenzisayo nokuthi ungasusa kanjani, bheka wethu Inqubomgomo yobumfihlo.
Ngamukela amakhukhi kusuka kule sayithi.